नेपाल नर्सिङ संघको निर्वाचन तोकिएकै समयमा, प्रा. पोखरेलले अब उम्मेदवारी नदिने - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ नेपाल नर्सिङ संघको निर्वाचन तोकिएकै समयमा, प्रा. पोखरेलले अब उम्मेदवारी नदिने
नेपाल नर्सिङ संघको निर्वाचन तोकिएकै समयमा, प्रा. पोखरेलले अब उम्मेदवारी नदिने
हेल्थ आवाज सोमबार, २०७६ कात्तिक २५ गते, १७:२० मा प्रकाशित
काठमाडौं—नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष तारा पोखरेलले नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुने बताएकी छन् । २ वर्ष ढिला गरी मिति घोषणा भएको संघको निर्वाचन तोकिएको समयमा नहुने आशंका बढिरहेका बेला पोखरेलले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने दाबी गरेकी हुन् ।
यहि पुस ९ गते संघको निर्वाचन मिति तय गरिएको छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा आशंका भइरहँदा संघकी अध्यक्ष पोखरेलले हेल्थ अवाजसँग तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बताएकी हुन्् ।
नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि लक्ष्मी राईको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय निर्वाचन तयारी समिति समेत गठन भइसकेको छ ।
‘चुनाव तयारी समिती गठन भइसकेको छ । समितिले काम समेत सुरु गरिसकेकाले तोकिएकै मितिमा चुनाव हुन्छ,’ हेल्थ आवाजसँग उनले भनिन् । संघको विधानमा प्रत्येक ३/३ वर्षमा नयाँ कार्यसमिति चयन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, झण्डै २ वर्ष ढिलो गरी ५ वर्षपछि मात्र निर्वाचन हुन लागेको हो ।
पोखरेलले उम्मेद्वारी नदिने
नयाँ कार्यकालका लागि संघकी वर्तमान अध्यक्ष तारा पोखरेलले उम्मेद्वारी नदिने भएकी छन् । संघमा नयाँ अनुहारलाई अवसर दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘यो संगठन हामीहरुको हक हितका लागि हो । हामीले नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो पटक म उठ्दिन । निर्वाचनबाट आउने नयाँ अध्यक्षलाई मेरो पूर्ण सहयोग रहनेछ ।’
चुनावमा भएको ढिलाइको नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु
नयाँ संरचनाअनुसार संघको विधान संशोधन गरिएको अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिइन् । विधान संशोधन गर्नुपरेकाले नै समयमा निर्वाचन गर्न नसकिएको उनको दाबी छ ।
‘हामीले नयाँ संरचना अनुसार विधान संशोधन ग¥यौं । त्यो सिडिओ कार्यालयबाट पास भएर आउनुपर्ने भएकाले चुनाव गर्न ढिला भएको हो,’ निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न नसकेकोमा उनले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने हेल्थआवाजसँग बताइन् ।
‘चुनाव समयमा सम्पन्न गर्न नसक्नुको विविध कारण छन् । यद्यपी अध्यक्षका हिसाबले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन म तयार छु ।’
संघको नयाँ नेतृत्व संघिय संरचना अनुसार चयन हुने पनि उनले उल्लेख गरिन् ।